विदेशी वस्तुको आयातमा वृद्धि : ७ महीनामा ८ खर्बको आयात
२०७७ फागुन, ७
फागुन ७, काठमाडौं । कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै जाँदा विदेशी वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विदेशी वस्तुको आयात कोरोना महामारी पूर्वकै अवस्थामा फर्किएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो सात महीनामा रू. आठ खर्ब बढीको आयात भएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको सात महीनाको (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म) तथ्यांकअनुसार रू. आठ खर्ब तीन अर्ब ६४ करोड बढीको आयात भएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा रू. आठ खर्ब तीन अर्ब बढीको आयात भएको थियो । यसैगरी सात महीनाको अवधिमा रू. ६९ अर्ब ९१ करोड ७० लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अबधिको तुलनामा ७ दशमलव ६१ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।
गत आवमा सोही अवधिमा रू. ६४ अर्ब ९७ करोड १२ लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार यो वर्ष व्यापार घाटामा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले सुधार भएको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२ र निर्यातको हिस्सा आठ प्रतिशत छ । हिस्सागत रुपमा हेर्दा आयातको हिस्सा मात्र शून्य दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सात महीनामा रू. आठ खर्ब ७३ अर्ब ५६ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापारबाट नेपालले रू. सात खर्ब ३३ अर्ब ७२ करोड घाटा बेहोरेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ५ दशमव ८० प्रतिशतले गिरावट हो ।
गत माघमा मात्रै गत आव भन्दा ३१ प्रतिशत बढीको वस्तु आयात भएको छ । गत वर्षको माघमा रू. एक खर्ब आठ अर्ब ९० करोडको आयात भएकामा यो माघमा रू. एक खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोडको आयात भएको हो ।
कुन महीना कति आयात ?
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना (साउन) मा रू. ८५ अर्ब ८० करोड, भदौमा रू. ९३ अर्ब चार करोड र असोजमा रू. एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड बराबरको विदेशी वस्तुका आयात भएको थियो ।
यसैगरी कात्तिकमा रू. एक खर्ब १० अर्ब २२ करोड, मंसिर महीनामा रू. एक खर्ब २३ अर्ब एक करोड, पुसमा रू. एक खर्ब ३५ अर्ब ७४ करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । हालसम्मकै धेरै माघ महीनामा रू. एक खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड बराबरको विदेशी वस्तु आयात भएको छ ।
सात महीनाको अवधिमा नेपालमा आयात हुने विदेशी वस्तुको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । सात महीनामा रू. ३९ अर्ब ७० करोड बढीको डिजेल आयात भएको छ । गत पुसमा रू. ३२ अर्ब ९३ करोड बढीको डिजेल आयात भएको थियो । रासस
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित तीनओटै योजनाको प्रतिइकाई खुद मूल्य बढ्यो
२७.९८ अंकले घटेको बजारमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)